Cusboonaysii LG G2 illaa 5.0 Lollipop Android | Androidsis
[Waa la cusboonaysiiyay] Sida si aan rasmi ahayn loogu cusbooneysiiyo LG G2 ilaa Android 5.0 Lollipop Model D802
Francisco Ruiz | | LG, Tababarada, Noocyada Android
Maanta waxaan rabaa inaan ku baro sida loo cusbooneysiiyo LG G2 ilaa Android 5.0 Lollipop si aan rasmi ahayn loo soo mariyo mid ka mid ah Romyadii ugu horreeyay ee ku saleysan shaqada tijaabada ah ee Cyanogenmod 12. Rom a, in kasta oo ay ku jirto marxalad aad u horeysa, si buuxda u shaqeyneysa oo aan lahayn nooc cayayaan ah oo xusid mudan.
Shaqada la qabsiga ee tan Rom Lollipop rom oo ku saleysan Cyanogenmod 12, waxaa fuliyay kooxda EvoM argagax, cunto kariye iyo xubin ka tirsan golaha horumarinta HTCMANIA Android. Waad ku mahadsan tahay halkan shaqada dareenka leh waxaanan kuu sheegayaa inaanu dhagta u taagi doonno horumarinta Romkan iyo cusboonaysiinta suurtagalka ah.
Kahor intaanan bilaabin faylasha lagama maarmaanka ah iyo habka biligleynaya, waa inaan kugula socodsiiyaa taas wax kasta oo aan awooday inaan tijaabiyo illaa iyo hadda si fiican ayey u shaqeeyaan iyo iyada oo aan lahayn nooc cayayaan ah oo mudan in la xoojiyo. Cayayaanka kaliya ee halista ah ee aan sheegi karo ilaa iyo hada waa mararka qaar in si qasab ah lagu xiro arjiga Dukumiintiyada.
Sida for Wifi, Bluetooth iyo iskuxirka shabakadaha xogta ayaa si fiican u shaqeeya, xitaa siinta taageero hooyo 4G shabakadaha. Fikradda kamaradda si weyn ayaa loo hagaajiyay iyadoo lagu daray kamaradda asalka ah ee google taas oo wax u dhimeysa kaamirada u gaarka ah Cyanogenmod, taas oo shaki la’aan ah guul weyn tan iyo markii arjiga kamaradu uu qaadayo sawirro tayo sare leh
1 Faylasha loo baahan yahay
2 Habka Flash ee Rom Android 5.0 Lollipop loogu talagalay qaabka LG G2 International
Faylasha loo baahan yahay
Rom Evomagix Android 5.0 Lollipop oo ku saleysan Cyanogenmod.
Gapps Google Android 5.0 Lollipop.
Saldhigga hoose ee D802, modem si loo xaliyo dhibaatada wareegga.
Dib u Soo Celinta TWRP 2.8.1.1
Marka faylasha oo dhan la soo dejiyo, waan sameyn doonnaa nuqul ka sameyso Sdcard-ka LG G2 oo ah nooca caalamiga ah ee D802, aan dib u bilowno Dib u Dhiska Mode waxaanuna usii soconaa inaanu raacno tilmaamaha biligleynaya ee aan hoosta sharaxayo ee xarafka ah isla markaana aan ka boodaynin wax talaabo ah.
Habka Flash ee Rom Android 5.0 Lollipop loogu talagalay qaabka LG G2 International
Horey dib loogulaabsaday Xaaladda Soo-kabashada, waa inay noqotaa Soo kabashada macquulka ah, waanu raaci doonaa tilmaamahan rakibaadda.
Waxa ugu horeeya ee aan sameyneyno ayaa ah cusboonaysi Soo-celinta nooca 2.8.1.1, tan tan xulashada Ku rakib Waxaan dooran doonnaa feylka ZIP ee TWRP horey loo soo dejiyey, Marka la iftiimiyo, taas oo ah arrin ilbiriqsiyo ah, waxaan aadeynaa ikhtiyaarka reboot waana dooran doonaa Dib ugulaabasho Xaaladda Soo-kabashada.
Marka dib loo bilaabo waxaan haysan doonaa soo kabashada cusub TWRP taas oo aan uga baahan nahay inaan raacno talaabooyinkan:
Waxaan aadeynaa xulashada Tirtirka dibna Cabbirta saafiga ah oo waxaan samaynaa a Masax wax kasta marka laga reebo xusuusta sdcard ee gudaha.
Hadda waxaan tagnaa ikhtiyaarka Ku rakib oo xulo ka soo dheji Rom Rom 5.0 Lollipop ka yimid EvoMagix oo shiday.
Waxaan ku laabaneynaa xulashada Ku rakib oo xulo Baseband KK waanan shidnaa.
Waxaan ku laabaneynaa xulashada Ku rakib oo xulo Gapps hurdiga ah waanan tooshnaa.
Ugu dambeyntii waxaan mar kale ku laabaneynaa xulashada Ku rakib oo xulo SuperSU waanan shidnaa.
Hadda waxaan dooran karnaa ikhtiyaarka Masax dalvik iyo keyd oo waxaan dib u bilaabi nidaamka.
Terminalka wuxuu qaadan doonaa ugu yaraan hal toban daqiiqo si buuxda dib loogu bilaabo, ee ha quusan oo samir. Mar alla markii ay dib u bilaabato, waxaad awoodi doontaa inaad aragto dhammaan dhinacyada Naqshadaynta Waxyaabaha noocyadan cusub ee Android 5.0 Lollipop.
La cusbooneysiiyay: Nofeembar 20: Ku socota qof kasta oo leh dhibaato leh tusaale wareega shaashadda ama rabto dhaqaajiso furitaanka laba jibbaarada Waan kula talinayaa dhex mar boostadan oo aan ku sharxayo sida loo dayactiro ama loo helo arrimahan.
Xigasho - HTC Mania
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » LG » [Waa la cusboonaysiiyay] Sida si aan rasmi ahayn loogu cusbooneysiiyo LG G2 ilaa Android 5.0 Lollipop Model D802
41 faallooyin, ka tag taada
Wixii d 805 lagu iibsaday si cad tan tan 4.2.2 mahadsanid
Ku jawaab jarmal
Run ma ahan dijo
Waxaan hayaa LG G2 oo wata nooca softiweerka ah D80220g-EUR-XX laakiin moobilku ma haysto xusuus SD ah oo dibedda ah. Ma sameyn karo
Ku jawaab Enentredicho
Xaqiiqdii, haddii aad awooddo, lg g2 ma taageerto sd-ka dibedda, waa inaad nuqul ka dhigtaa feylasha xusuusta gudaha ee aaladdaadu leedahay.
haye, ma ku rakibi kartaa Rom kan lg g2 d806?
Ku jawaab ezequiel
Miyuu ku habboon yahay d806 ??? X fadlan ka jawaab. Waxaan horay isku dayay dhowr CM 12 runtuna waxay tahay in midkoodna uusan si xasiloon ugu shaqeynaynin isticmaalka maalinlaha ah ...
Ku jawaab Martin
manuelm argagixiso dijo
Aniga oo ku hadlaya magaca Team Evomagix, Leonevo, Xurdep, Axel_11 iyo server, mahadsanid maqaalka, haa, magaca saxda ah waa Evomagix
Waad ku mahadsan tahay Buugga saxda ah ee ku saabsan X-ga ugu dambeeya Si aan kuugu sheegno waa inaan kuugu mahadnaqnaa shaqada weyn ee lagu qabtay Rom-kan xiisaha leh ee LG G2.
Maty trelew dijo
Waa salaaman tahay Manuelmagic, iska warran? Weydiinta horyaalnimada, waad ogtahay inaan rakibo rasmiga rasmiga ah ee Evomagix Android Lollipop Rom oo ku saleysan LG's v30E. iyo cilada kaliya ee aan helay waxay ahayd shaashadda shaashadda ma qaado, mana soo dejisan karo feylasha whatsapp-ka tusaale ahaan .. waxay ka goosataa shabakadda markay isku dayayso inay soo dejiso, iyo sawirka qabashada markii la furayo wuxuu muujinayaa naxdin. ku calaamadee Sawir laba u kala qaad ... ma ogtahay waxa dhibaatadu noqon karto? Mahadsanid, waxaan sugayaa jawaabtaada.
Ku jawaab Maty Trelew
Telefoonkaygu wuxuu kujiray calaamadda LG iyo Cyanogenmod- Mana bilaabmayo, miyaad wax iga caawin kartaa?
Waad salaaman tahay, waxaan ku waydiinayaa su'aal, lg g2-kayga markii aan rakiboyay wax walba oo raacaya talaabooyinkan, markii iigu horaysay ee aan rakibo waxay u shaqaysay si qumman, ka dib waxaan rakibey baseband-ka oo aanan rakibin, waana la hubiyay bilowgii, sidee Waan hagaajinayaa taas, ma bilaabmayo, waxay muujineysaa cyanogenmod halkaasna way ku sii jirtaa waxayna ku noqotaa astaanta LG mahadsanid, emailkeygu waa ramirog90@gmail.com Hadaad iiga jawaabi kartid waan ku qanacsanahay, salaan
Juan Cruz dijo
La-tashiga Waan sameeyay dhammaan talaabooyinka lagu sharaxay sida loo rakibo, waxaan haystaa lg g2 d806 waqtiga dib u bilaabida waxay ku sii jirtaa inta u dhexeysa calaamadda lg iyo warqadda cyanogenmod iyo wixii la mid ah laakiin ma dhammeyso booting, waad ii sheegi kartaa haddii waa wax caadi ah ama haddii ay ku habboon tahay roomaanta 802 ee 806 ama taas oo aan ku fashilmayo, mahadsanid
Wanaagsan, ma ii sheegi kartaa haddii Romkani u shaqeeyo Lg G2 mini D610Ar. Haddayna ahayn kee baad igu talin kartaa. Mahadsanid
Ku jawaab juan manuel
Waad salaaman tihiin dhamaantiin! ROM-ka weyn, oo si habsami leh u socda d806, aad u faraxsan kadib dhowr cilladood oo CM 12s ah
Ma ii sharxi kartaa sababta aan u rakibey .. waxaanan helayaa oo keliya waxyaabaha caadiga ah .. wicitaannada farriimaha .. Waxaan iraahdaa menu aan dhammaystirnayn .. ka jawaab urg haddii aad awooddo
hello nooca aad isticmaashay si aad ugu rakibtid romka?
Ku jawaab Mauro
Aad u fiican dhamaantiis perfect. gudaha D802…. MAHADSANID!!
Gilbert lozano dijo
Ka qaybqaadashada aadka u wanaagsan ee ROM-ka, dareere aad u fiican iyo waayo-aragnimo wanaagsan oo leh nacnaca. Runtii waan ku qanacsanahay inaad nala wadaagto macluumaadkan. Waxaan tijaabinayay dhowr maalmood waxaanan ogaaday waxoogaa koror ah isticmaalka batteriga, qalad yar oo ka yimid kumbuyuutarka, arjiga muuqaalka muuqaalka iyo jawaabta Bluetooth. Laakiin kaalay, waa habeen, marka waa caadi waana inaan sugnaa inta horumarkiisa uu sii socdo. Aad baad ugu mahadsantahay macluumaadka!
Ku jawaab Gilbert Lozano
Leo Garrido dijo
Waad salaaman tahay! Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay leedahay waxqabadyo dekedo leh, sida kala-goynta. Mahadsanid.
Jawaab Leo Garrido
Ku rakib romkaankan lg g2 d802 oo waxaan baaray cayayaanka soo socda:
- Markaad wicitaan kujirto, hadaad gujiso goobaha (liiska menu-ga aad wicayso) wuu xannibmaa oo ma shaqeeyo. Waa inaad ka xidho arjiga taleefanka maamulaha arjiga oo aad dib u gasho
- Markii ay kuu soo diraan cod duuba WhatsApp, haddii aad mobilkaaga u dhawaato dhagta si aad u dhageysato, waxay u egtahay aalado loo yaqaan 'robot' xitaa haddii aad mobilkaaga ka saarto dhegtaada oo aad rabto inaad ka maqasho qofka ku hadla caadiga ah, waa sii wadaan inay u dhawaaqaan sida aalado Waa inaad ka xiraa arjiga maamulaha hawsha oo aad dib u furtaa.
- moobilka kuma aamusin kartid. Ama waa cod ama gariir
- Codsiga saacadda, guji alaarmiga iyo meenuga si aad u kiciso alaarmiga, haddii aad gujiso "no profile xulay" codsigu wuu xirmayaa
Waxaan rajeynayaa in khaladaadkaan dhaqso loo saxi doono. Haddii aan arko guuldarro kale, waan ka faalloon doonaa. I soo raac twitter: fjmgcs
4G / LTE ma shaqeeyaa? Waxaan rabaa inaan rakibo laakiin waxaan u baahanahay inaan ogaado tan.
Ku jawaab Raimzy
Jose Rios dijo
Haddii ay ka shaqeyneyso D805-kayga.
Ku jawaab jose rios
Waxaad dhahdaa Lollypop ayaa si caadi ah kuugu maamusha D805-kaaga?
Ma waxaad u jeeddaa inaad ku shiday D802 Baseband D805-kaaga, mise miyaad heshay Baseband sax ah oo loogu talagalay nooca D805 dhinaca kale? Hadday sidaas tahay, waan ku qanacsanahay haddii aad la wadaagto iskuxiraha meesha aad ka iibsatay Baseband ee D805.
Waad ku mahadsantihiin.
oluu waxaa loogu talagalay lg g2 d800 ???
Ku jawaab nacho
Marco Martinez dijo
Baseband-ka waxaa lagu rakibayaa oo keliya haddii aad leedahay Jelly Bean, haddii aad horey u haysatid Kit Kat hadda looma baahna, nooca EvoMagixisadda horay ayaa loogu sii daayay Final Beta, laakiin batteriga, kaydka iyo g3 daruuraha ah ima qancin Isla barnaamijyadan la rakibo, baytarigu wuu sii dheeraaday, iyo in aan masaxay, iyo hagaajinta iyo dib u soo celinta batteriga, markaa waan sugi doonaa sarkaalka, waxaa laga yaabaa inaan is-maamul dheeraad ah haysto.
Jawaab ku bixi Marco Martinez
Waad salaaman tihiin kadib talaabooyinkii aan u galay dib u soo cusboonaysiinta si aan u rakibo TWRP Rewcovery 2.8.1.1 wixii intaa ka dambeeya dib dambe ugama geli karo dib u xoqista shaashad madow oo keliya. Maxay noqon kartaa dhibaatada oo aan cunay si aan u xaliyo
Taleefankayga gacanta ayaa joojiyay shaqadiisii ​​Waxaan haystaa erayga cyanogenmod wuxuuna ku noqonayaa astaanta lg, fadlan caawi
Ma la shaqeyn doonaa LG-D800? Waxaan arkaa in qofna uusan haysan nuucaan 🙁 wuxuu ka socdaa at & t
celeo ardon dijo
wuxuu u shaqeeyaa lg g2 vs980 oo laga keenay verizon? maadaama aan ku haysto kitkat ???? farxad
Ku jawaab celeo ardon
Erick melendez dijo
diskulpen wuxuu u shaqeeyaa lg g2 d999
Jawaab Erick Melendez
Haddii Romku si fiican u socdo D805-kayga.
Ka dib 1 isbuuc ee isticmaalka, waxaan sugi doonaa Lollipop Rasmiga ah, batteriga ima qancinayo.Haddii ay fiicantahay waa, laakiin aniga ima shaqeynayo, wali waan sii wadi doonaa g3 daruurta leh.
Ivo Luis dijo
Markii aad tagtay inaad u wareejiso feylasha "Sdcard" waxa ugu horeeya ee la sameeyo, xagee dhigtay? My 805 malahan xasuus dibadeed. Waan ku faraxsanahay caawintaada
Jawaab Ivo Luis
Carlos Aragon dijo
Kuwa ka faallooda inay ku xiran tahay calaamadda LG iyo CyanogenMod, samir, waxaan ku rakibay D805 oo way xirnayd in muddo ah sidoo kale, laakiin daqiiqado yar ka dib (Oo aan u dhigo wax lacag ah) waan xamuul OS.
Ku jawaab Carlos Aragon
hello nooca aad isticmaashay si aad ugu rakibtid romka? Waxaan haystaa d806
Wixii loo yaqaan 'D806' nooca 'D802' ayaa loo isticmaalay
AJ Jaramo dijo
taleefankaygu dib ayuu u soo kabanayaa kaliya sidaan u xallinayo nooca cayayaanka D802 waad ku mahadsan tahay kaalmadaada
Jawaab AJ Jaramo
Juan Castro dijo
Wanaagsan, waxaan kaaga soo qorayaa Dominican Republic waxaan haystaa g2 vs980 oo markaan rabo inaan cusboonaysiiyo, waxay ii sheegtaa inay ku habboon tahay telefoonka waxa la sameeyo oo aan la cusboonaysiin
Jawaab juan castro
Waad salaaman tihiin, galabtii beuna, ra'yigeygu waa hadii qof garanayo meesha aan ka ogaan karo hadii sanamka Alcatel 2 6037b loo cusbooneysiin doono lollipop ama haddii uu jiro wax la kariyey oo Rom ah oo ku saleysan lollipop, waan jeclaan lahaa tabarucaada, waan ogahay in fiidiyowgu yahay kama hadlayo Terminalkan laakiin waxaan doonayay inaan faallo ka bixiyo bal u fiirso hadii uu jiro qof wax garanaya haddii ay jiri doonaan cusbooneysiin rasmi ah oo ku saabsan terminal-ka
myller max dijo
Mowjad Waan ogaan lahaa sida loo dhigo LG G2 mini D618. ROM ma sameeyaa nacnaca? Fadlan ii sharax ...
Ku jawaab max myller
Haye! ma jirtaa waddo kasta oo lagu sameeyo cusbooneysiinta nacnaca iyada oo aan la rujin qalabka? Waxaan haystaa d80020Y waana ii suurtoobi weyday!
loogu talagalay ADEEGYADA LG-F320L ???
Telegram 2.0 ayaa halkan la socda Naqshadeynta Maaddooyinka, koontooyinno is-dumin kara iyo waxyaabo badan oo badan [APK]
Meizu MX4 Pro hadda waa rasmi rasmi ah Exynos 5430 chip, 3GB RAM iyo kamarad 20.7MP